ကွန်ပျူတာနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော်လည်း တတ်နိင်သလောက်လေးရှာဖွေပြီး တင်ပေးပါ့မယ်
လောလောဆယ်တော့အားလုံးအသုံးဝင်မဲ့window7နဲ့ အသင့်တော်ဆုံး antivirus 10 မျိုးလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဆင်ပြေပါစေဗျာ.................
List of Anti-Virus Software Compatible with Windows 7
Windows7တွင် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ feature အသစ်တွေ ပါဝင်လာပေမယ့် Antivirus ပရိုဂရမ်များကိုတော့ တွဲဖက် အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ Antivirus ပရိုဂရမ် (၁၀)ခုကတော့ Windows7နဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြု သင့်တဲ့ Antivirus ပရိုဂရမ်များ ဖြစ်ပါတယ်..။
AVG 9.0 ကို အခမဲ့ဗားရှင်း AVG Anti-virus Free ဖြင့် ရရှိနိုင်သလို AVG Anti-virus, AVG Internet Security, AVG Internet Security Business Edition စတဲ့ ပုံမှန်နှစ်စဉ်ကြေး (Subscription Edition) ဖြင့်လည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။ Free Edition မှာ Anti-virus နဲ့ Anti-Spyware တွေကို အသုံးပြုနိုင်ပေမယ့် အလိုအလျောက် update ပြုလုပ်ပေးနိုင်မယ့် စနစ်တော့ ပါဝင်လာခြင်း မရှိပါဘူး။ Update ပြုလုပ်လိုတဲ့အခါမှာတော့ manual ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Subscription Edition မှာတော့ Free Edition မှာ ပါဝင်တဲ့ feature များကို အသုံးပြုနိုင်သလို Phishing နဲ့ Anti-rookit ကာကွယ်မှုစတဲ့ feature တွေကို အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ AVG package နှင့် ပတ်သက်ပြီး Mysticgeek's review of AVG Free တွင်လည်း အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Avast Anti-Virus Home
လက်ရှိ Avast version ကတော့ 4.8 ဖြစ်ပြီး Version 5.0 ကိုတော့ မကြာခင် အသုံးပြုနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Home Edition နဲ့ နှစ်စဉ်ကြေး ပေးသွင်းကာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Professional Edition ဆိုပြီး ရရှိနိုင်ပါတယ်။ Home Edition မှာ Anti-virus, Anti-Spyware, Anti-rookit, Automatic update စတာတွေကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး Professional Edition မှာတော့ Free Edition မှာပါဝင်တဲ့ feature အပြင်၊ အခြား feature မြောက်မြားစွာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Revies of Atast ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်လည်း ၀င်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
McAFee 2010 ကို Virus Scan Plus, Internet Security, Total Protection စသည့် Home Edition သုံးမျိုးဖြင့် ရရှိနိုင်ပြီး Edition တစ်ခုစီတွင် Anti-Virus, Anti-Spyware, Anti-Phishing နဲ့ Firewall Protection စတဲ့ feature တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ အသေးစိတ် အကြောင်းအရာကိုတော့ McAFee မှာ ၀င်ရောက် ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
Norton Anti-Virus 2010
Norton 2010 ကို Internet Security, Anti-virus စသည့် version နှစ်မျိုးဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ၎င်း version နှစ်မျိုးစလုံးတွင် Virus, Spyware, Trojan horse, Worm, Rookit တို့ ၀င်ရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် အချက်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ Internet Security version မှာ တော့ Firewall အတွက် နည်းလမ်းနှစ်မျိုး ပါဝင်ပြီး အခြားလုံခြုံရေး feature များလည်း ပါဝင်လာပါတယ်။ Norton website သို့ သွားရောက်ပြီး အသေးစိတ်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
Kaspersky ရဲ့ Antivirus 2010 နဲ့ Internet Security 2010 တို့ကို download ပြုလုပ် ကာ ရက် ၃၀ စမ်းသပ်သုံးစွဲနိုင်ပါ တယ်။ ၎င်းင်းဗားရှင်းနှစ်ခုစလုံးတွင် virus, spyware, Trojan, worm, bot စသည်တို့ဝင်ရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အချက်တွေပါ ၀င်သည့်အပြင် phishing နဲ့ identity theft ကာကွယ်မှုစနစ်တွေ လည်းပါဝင်လာပါတယ်။ Internet Security ဗားရှင်းမှာတော့ applicaton နဲ့ browser တို့မှ အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ Safe Run လိုအဆင့်မြင့် feature တွေ ပါဝင် လာသည့်အပြင် application တွေရဲ့လုံခြုံ မှုကိုစစ်ဆေးပေးနိုင်တဲ့ Security Analyzer စတဲ့ feature တွေပါ ၀င်လာပါတယ်။
MicroTrend Micro က ထုတ်လုပ်တဲ့ Antivirus + Antispyware, Internet Security, Internet Security Pro တို့ကို အခမဲ့ စမ်းသပ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Version တစ်ခုစီမှာ Anti virus နဲ့ Anti sypware ကာကွယ်မှုဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီး Internet Secruity Version တွင် Web ၊ E-mail နဲ့ Parental ကာကွယ်မှုစနစ်များကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ Trend Micro Site တွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Panda 2010 မှာတော့ Anti-virus Pro, Internet Security, Global Protection စတဲ့ version များဖြင့် ရရှိနိုင်ပြီး antivirus, anti-spyware, anti-phishing, firewall protection တို့ကို အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Internet Security version တွင် anti-spam, parental control, backup စသည့် feature များ ထပ်ပေါင်းပါဝင်ပြီး Global Protection version မှာတော့ backup နဲ့ PC Tuneup feature များ ပါဝင်လာပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ Panda Security Site မှာ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
Spyware Doctor ပါဝင်တဲ့ Antivirus 2010 ဟာ Virus, Spyware, Trojan, Adware, Worm, Keylogger စသည် များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ PC Tools Site ရဲ့ Site မှာ ၀င်ရောက် လေ့လာ နိုင်ပါတယ်။
Sunbelt Software ရဲ့ VIPRE (Virus Intrusion Protection Remendation Engine) ဟာ Windows7နဲ့ တွဲဖက် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Antivirus + Antispyware ပရိုဂရမ် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Windows7ရဲ့ XP Mode ဖြင့်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး ယင်းအတွက် လိုင်စင်ကြေးထပ်မံပေးသွင်းဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ Sunbelt Software Site မှာ ၀င်ရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Microsoft Security Essentials ဟာ အခမဲ့ download ပြုလုပ်ကာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Antivirus ပရိုဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။ Virus, Spyware အပြင် အခြားအန္တရာယ်ရှိတဲ့ Rookit, Trojan စတဲ့ software တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သံသယဖြစ်ဖွယ်ဖိုင်များနဲ့ ပရိုဂရမ်များ လှုပ်ရှားမှုများကိုလည်း စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပေးနိုင်ပြီး download ဖိုင်များနဲ့ attach file များကိုလည်း စစ်ဆေးပေးနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ Microsoft Security Essentials ရဲ့ site မှာ သွားရောက် download ပြုလုပ် နိုင်ပါတယ်။
Posted by မောင်မောင် at 01:53
မိတ်ဆွေများရဲ. စကားတစ်ခွန်းဟာ ကျွန်တော်.အတွက် အားဆေးတစ်ခွက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော် နဲ. ကျနော်. အစ်မ
မောင်မောင် တို. မောင်နှမ တွေက အဒေါ်နဲ. ဘဲ နေရတာများတယ်။ အမေနဲအဖွားက ကျောက်စိမ်းမြေ မှာ ဓျေးရောင်းကြတော. မခေါ်ထားဘူး ။ကျနော်နဲ.အစ်မကို ကျောင...
ကမ္ဘာ.အသက်အငယ်ဆုံးသော ဘူတန် ဘုရင်၏ လက်ထက်ပွဲ
အသက် ၃၁ နှစ် ရှိသော ဘူတန်နိုင်ငံ ဘုရင် သည် အသက် ၂၁ နှစ် အရွယ်ကျောင်းသူလေးနဲ. ပထမဆုံးသော သူ၏ လက်ထက်ပွဲကို နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားမျ...
၂၀၁၁ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့သြဇာအကြီးဆုံး အမျိုးသမီး ၁၀၀ စာရင်းကို Forbes မဂ္ဂဇင်း ထုတ်ပြန်
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့သြဇာအကြီးဆုံး အမျိုးသမီး ၁၀၀ စာရင်းကို Forbes မဂ္ဂဇင်းက သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ် မာကယ်၊ ...
ရိုးရှင်းသော ဘ၀ မူရင်း နဲ. ပြန်ဆိုတေး
အပူချိန် ၂၁ ဒီဂရီ လောက်ရှိသော တနင်္လာနေ. နေ.လည် ၁ နာရီခန်.အချိန်၌မောင်မောင်နှင်.သူငယ်ချင်းတို.နှစ်ယောက်ဆရာမမိသားစုဖြင်.ချိန်း...
အပြောင်းအလဲ ( မောင်စိန်ဝင်းပုတီးကုန်း)
နှစ်ဦးတူယှဉ် သည်အပင်အောက် ပန်းကြွေကောက်စဉ် ရင်တထိတ်ထိတ် သည်အရိပ်မှာ ချစ်စိတ်ဝေခဲ့ဖူးတယ်. . .။ သစ်မြစ်ဆုံခွ ယှဉ်ထိုင်ကြရင်း မြစ်ခေ...
ဂျက်လီ၏ အအောင်မြင်ဆုံး ဇတ်ကားဆယ်ကား
သရုပ်ဆောင်တွေထည်းမှာ ဂျက်လီ နဲ. ဂျက်ကီချန်းကို ငယ်စဉ်ကတည်းက နှစ်သက်စွာ အားပေးခဲ.တာ ခုချိန်ထိပါဘဲ။ မောင်မောင်လိုဘဲ နှစ်သက်သူတွေ ပြန်ပြီး ကြ...
ရှေးရှေးတုန်းက တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ မင်းပျိုမင်းလွင် တစ်ပါးဟာ တောင်ညာစံဒေ၀ီ တင်မြှောက်ဖို့ လိုအပ်လာတော့ မှူးမတ်ကြီးများကို သ...
မှတ်သားဖွယ်ရာ ပညာရှိတို.၏ အဆိုအမိန်.များ
အလိမ္မာစာမှာရှိ မှတ်ဖွယ်မှတ်ရာ၊ထိုထိုစာကို၊ ရှာ၍မပြတ်၊ အိမ်တွင်ဖတ်၊ ဖတ်ပြန်သော်ကား၊ဖတ်ပါများက၊ သားမယားပင်၊ မိုက်မှားခဲ.စွာ၊ မလိမ္မာ...
သင်.မျက်နှာပေါ်ရှိ မဲ.များမှ ပြောပြသော သင်.အကြောင်း
မျက်နှာပေါ်ရှိ မှဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ် ပထမဦးစွာ သင့်မျက်နှာပေါ်ရှိမှဲ့ကို အရင် ဆန်းစစ်ပါ။ ပြီးရင် သင့်မျက်နှာပေါ်ရှိ မှဲ့နေရာကို ပုံပါအတိုင်...
နိုင်ငံခြား ဇတ်လမ်းများ (6)
Blog Archive Dec 22 (1) Oct 07 (1) Sep 22 (1) Aug 21 (1) Aug 18 (1) Aug 14 (1) Aug 13 (1) Aug 07 (1) Aug 04 (1) Jul 25 (1) Jul 22 (1) Jul 09 (1) Jun 29 (1) Jun 27 (1) Jun 24 (1) Jun 22 (1) Jun 19 (1) Jun 17 (1) Jun 13 (1) Jun 08 (1) Jun 06 (1) Jun 03 (1) May 28 (1) May 26 (1) May 23 (1) May 21 (1) May 03 (1) May 01 (1) Apr 30 (1) Apr 27 (1) Apr 23 (1) Apr 19 (1) Apr 17 (1) Apr 09 (1) Apr 07 (1) Apr 05 (1) Mar 30 (1) Mar 25 (1) Mar 21 (1) Mar 19 (1) Mar 17 (1) Mar 15 (1) Mar 09 (1) Mar 06 (1) Mar 05 (1) Mar 01 (1) Feb 29 (1) Feb 26 (1) Feb 24 (1) Feb 20 (1) Feb 19 (1) Feb 18 (1) Feb 14 (1) Feb 11 (1) Feb 08 (1) Feb 06 (1) Feb 05 (1) Feb 01 (1) Jan 30 (1) Jan 28 (1) Jan 27 (1) Jan 23 (1) Jan 22 (1) Jan 20 (1) Jan 19 (1) Jan 18 (1) Jan 16 (1) Jan 15 (1) Jan 12 (1) Jan 11 (1) Jan 09 (1) Jan 07 (1) Jan 06 (1) Jan 05 (1) Jan 03 (1) Dec 31 (1) Dec 26 (1) Dec 24 (1) Dec 22 (1) Dec 19 (1) Dec 17 (1) Dec 16 (1) Dec 13 (1) Dec 11 (1) Dec 07 (1) Dec 05 (1) Dec 04 (1) Dec 02 (1) Dec 01 (1) Nov 28 (2) Nov 25 (1) Nov 23 (1) Nov 21 (1) Nov 20 (1) Nov 19 (1) Nov 18 (1) Nov 17 (1) Nov 15 (1) Nov 14 (1) Nov 12 (1) Nov 11 (1) Nov 10 (1) Nov 09 (1) Nov 07 (1) Nov 05 (1) Nov 04 (1) Nov 03 (1) Nov 01 (1) Oct 31 (1) Oct 29 (2) Oct 27 (1) Oct 26 (1) Oct 24 (1) Oct 22 (1) Oct 19 (1) Oct 15 (1) Oct 13 (1) Oct 12 (1) Oct 10 (3) Oct 08 (1) Oct 07 (1) Oct 03 (2) Oct 02 (1) Sep 30 (1) Sep 29 (1) Sep 28 (1) Sep 27 (1) Sep 26 (2) Sep 25 (1) Sep 24 (1) Sep 23 (1) Sep 22 (2) Sep 20 (1) Sep 19 (1) Sep 11 (1) Sep 09 (1) Sep 08 (1) Sep 05 (2) Sep 03 (1) Sep 02 (1) Sep 01 (3) Aug 31 (4) Aug 30 (1) Aug 29 (2) Aug 28 (3) Aug 27 (2) Aug 26 (1) Aug 25 (2) Aug 24 (2) Aug 23 (4) Aug 22 (3) Aug 21 (2) Aug 20 (1) Aug 19 (2) Aug 18 (3) Aug 17 (3) Aug 16 (3) Aug 15 (2) Aug 14 (1) Aug 13 (4) Aug 12 (2) Aug 11 (2) Aug 10 (3) Aug 09 (3) Aug 08 (2) Aug 07 (2) Aug 06 (1) Aug 01 (1) Jul 31 (1) Jul 27 (1) Jul 26 (1) Jul 24 (1) Jul 22 (1) Jul 21 (1) Jul 20 (2) Jul 19 (3) Jul 17 (1) Jul 16 (2) Jul 14 (1) Jul 12 (1) Jul 10 (1) Jul 04 (1) Jul 01 (2) Jun 27 (1) Jun 26 (2) Jun 23 (3) Jun 18 (2) Jun 16 (1) Jun 13 (1) Jun 11 (2) Jun 06 (1) Jun 05 (1) Jun 04 (1) May 29 (1) May 27 (1) May 24 (1) May 22 (1) May 21 (2) May 19 (1) May 10 (1) May 09 (1) May 07 (1) Apr 27 (1) Apr 26 (1) Apr 24 (1) Apr 20 (2) Apr 19 (1) Apr 15 (2) Apr 10 (3) Apr 02 (2) Mar 31 (1) Mar 30 (1) Mar 29 (1) Mar 27 (1) Mar 19 (1) Mar 18 (2) Mar 13 (1) Mar 11 (2) Mar 07 (3) Feb 26 (1) Feb 24 (2) Feb 20 (1) Feb 19 (1) Feb 17 (1) Feb 16 (2) Feb 13 (4) Feb 11 (1) Feb 10 (1) Feb 09 (5) Feb 07 (1) Feb 06 (2) Feb 05 (8) Feb 04 (2) Feb 03 (8) Feb 02 (6) Feb 01 (1) Jan 31 (4) Jan 30 (15) Jan 28 (1) Jan 27 (3)
Copyright (c) 2011 မြစ်ဆုံ
Comment Rss | Post Rss
Site Design By 2012 Blogger Templates
Thanks To britney spears hot Wallpapers, 2012 HD Wallpapers and MediaFire Free Download